Enwere ike ị nweta backlinks si Twitter?
Ịzụlite azụmahịa gị n'Ịntanet bụ naanị ọkara nke agha ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịmepụta saịtị gị maka nchọta ọchụchọ na nke ọma maka ndị ahịa gị. Ọ dabara na, njikarịcha search engine arụ ọrụ maka nzube a. Ndekọ backlinks kachasị mma nwere ike inyere gị aka imeziwanye àgwà gị ma na-adọta a na-aga n'ihu na ebe nrụọrụ weebụ gị. Iji nweta nsonaazụ TOP Google, n'etiti ihe ndị ọzọ, ịchọrọ ọtụtụ nzaghachi dị elu site na saịtị PR dị elu dika Google, Facebook, Twitter, na ndị ọzọ. Ihe ịrịba ama sitere na ebe nrụọrụ weebụ ndị dị elu na-egosi Google otú ewu na saịtị gị dị - buy cheap 3-mmc online. Twitter bụ ihe a na-ewu ewu, onye a ma ama, na nke dị elu nke dị na peeji nke PageRank nke nwere ike ịnye saịtị gị na ọtụtụ ihe njikọ mmanya. N'ebe a ị nwere ike igbanye ọtụtụ backlinks dị elu na-enweghị akwụ ụgwọ ọ bụla. Ihe niile ị chọrọ bụ ịtọkọta tweet na-adọrọ adọrọ, fanye backlinks na mpaghara gị na ya, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọtụtụ mkpa hashtags.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe zuru ezu iji nweta ihe ntanetị azụ na saịtị gị site na Twitter. Olileanya, ozi a ga-enyere gị aka melite ebe nrụọrụ weebụ gị na-adọta ndị ahịa.
Olee otu esi eji njirimara Twitter gị maka njikọ?
Twitter bụ nchịkọta mmekọrịta mmadụ na-ewu ewu na-enye ohere ịmepụta backlinks site na ya. Ọ na-enye ebe abụọ na profaịlụ gị iji tinye njikọ njikọ weebụsaịtị. Nke mbụ bụ ebe profaịlụ mbụ, onwe ya nke abụọ bụ n'ime mkpụrụokwu 160 na ngalaba Bio. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnweta njikọ na saịtị ndị na-adọta data sitere na profaịlụ Twitter. Ebe nrụọrụ weebụ nke na-ewe ozi site na Twitter gụnyere Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, na Favstar.
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị a, debe profaịlụ Twitter gị ma ọ bụ gbanwee ya iji tinye njikọ gị na saịtị gị na ebe nrụọrụ weebụ abụọ ahụ.Ọzọkwa, jụọ ndị ahịa gị otu ihe ahụ.
E nwere ọtụtụ akụkụ dị mkpa ị ga-eburu n'uche iburu njikọ na Twitter. Nke mbụ, nnukwu ego nke njikọ ị nwere ike inweta na nhazi ihu ọha a dị ala. Ọ pụtara na ha adịghị agafe okporo ụzọ na saịtị gị. Otú ọ dị, ịkwanye njikọ sitere na saịtị PR dị elu ka nwere nnukwu uru na saịtị gị ma gosi engines ọchụchọ na ngalaba gị kwesịrị inweta ọkwa kachasị elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Ihe ọzọ ị kwesịrị ịmara banyere njikọ njikọ na Twitter bụ na njikọ niile dịka ebe a dị ka URL dị egwu ma ọ bụghị njikọ njikọ ederede arịlịka. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na URL gị nwere ike ịgụta ọnụ, doro anya na kachasị.
Usoro nke ịmepụta njikọ na Twitter gụnyere usoro ndị a:
Banye na akaụntụ Twitter gị na tweet njikọ gị
Ị nwere ike iji ụfọdụ ederede ọchị ma na-emetụ egwu, ọ bụghị naanị njikọ. Ozugbo ezitere gị tweet, a ga-enweta ozi a maka ụmụazụ gị.
Tinye hehtag tupu ederede isiokwu
Ọ dị ịrịba ama iji hashtags tupu okwu ọ bụla dị mkpa ma dị elu nke ịchọrọ n'usoro site na SERP dika ndi oru choro Twitter tinye usoro hashtags. Site n'ụzọ, i nwekwara ike nwee njikọ nke hashtag.
Mee ka ndị na-eso ụzọ gị chegharịa gị tweets
Tweets gị kwesịrị ịchọta, na-eme ihe ọbụla na ọbụna imebi ka ndị ọrụ retweet ya na ha. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị nweghị nkà n'ịde ederede, jụọ ndị na-eso ụzọ gị ozugbo ka ha weghachite njikọ ahụ na tweet mbụ.
Gaa na TweetMeme
TweetMeme bụ ebe nrụọrụ weebụ nke na-enyocha ma na-ewepụtakwa tweets kachasị mmasị.N'ihi ya, nzube gị bụ ka ịpụta na ibe saịtị a, na-ekepụta tweet na-eburu n'isi.